Kumele nginyuse amasokisi - Modise | isiZulu
Kumele nginyuse amasokisi - Modise
Anginanxa namuntu - Modise
IDowns izodlala ngaphandle kukaLaffor noModise
Sizokwenza into yamehlo - Teko
Johannesburg - UTeko Modise uthi ukushiywa kwakhe ngaphandle eqenjini leBafana Bafana sekumnike isikhathi sokubhekisisa ukungenzi kahle kweMamelodi Sundowns kule sizini, kodwa futhi uthi bakha amasu azobasiza ngokuzayo.
AmaBrazilians awenzi neze kahle selokhu kuqale isizini, njengoba ehlulwe imidlalo emibili anqoba owodwa emidlalweni emithathu yePSL, umdlalo wabo wokugcina baguqiswa yiMaritzburg United ngo 2-1 bedlala ekhaya, nowaphetha abalandeli befuna umqeqeshi uJohan Neeskens akhonjwe indlela.
Kodwa, uModise uthi umqeqeshi akuyena kuphela okumele agxekwe ngokungenzi kahle kwabo, uphinde watshela iFootball411 ukuthi sekuyisikhathi sokuba ezakhe zizinuke amakhwapha.
"Ngicabanga ukuthi abadlali kumele badlale ngokuzimisela okukhulu. Kumele sidlale sengathi sidlala okokugcina,” kuqhuba lo mdlali.
"Akusizi ukushintsha ithimba labaqeqeshi. Kuxoshwe abaqeqeshi ngoba abadlali bengawenzi umsebenzi ngendlela.”